ဝိတ်ဂိမ်း ဒိုင်ယာရီ – Weight Gain Diary | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဝိတ်ဂိမ်း ဒိုင်ယာရီ – Weight Gain Diary	33
Posted by ဇီဇီ on Feb 24, 2016 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Local Guides, My Dear Diary, Travel | 33 comments
ဒီ တစ်ခေါက် ပြန်တော့ ၃ ပတ်။
စားခဲ့တာလည်း အများကြီးပဲ။ ကြုံသလိုစားခဲ့တာမို့ ကက်တဂိုရီ ခွဲပြီး ရေးမို့ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားမရ။
ဆိုတော့ အစဉ်အလိုက်ပဲ ရေးသွားမယ်နော့။ ပုံနဲ့ တကွ။
ဂျန် ၃၀ ရက်နေ့ညနေ ရောက်တော့ ကိုယ့် အဖွဲ့တွေ မွသဲတို့ မက်စေ့လှမ်းပို့ပြီး တားတယ်။ အပြင်စာမစားနဲ့အူးတဲ့။ ကိုယ်က ကျောက်ဖြူရခိုင် ဆိုင် ခြေလှမ်းပြင်နေမှကိုးးး။ ဟုတ် .. မစားပါဘူးပေါ့။ အာ့နဲ့ တောင်ဥက္ကလာရပ်ကွက် အတွင်းထဲ တောင်ဥက္ကလာ စာတိုက် နားက”ဥက္ကလာ ခေါက်ဆွဲဆိုင်” ကနေ ခေါက်ဆွဲကြော် ထမင်းကြော် နံကင် မှာစားလိုက်တယ်။ မီးခိုးနံ့သင်းတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် ငတ်နေတာမို့ စားလို့ကောင်းတာ။ (ရပ်ကွက် အပြင်က အစာမှ မဟုတ်။ အပြင်စာဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲနော့) “ဥက္ကလာ ခေါက်ဆွဲဆိုင်”
ဂျန် ၃၁ ရက်ကျ ကိုယ့် အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့သလေ။ မနက်ကို FMI အိမ်ယာထဲက “သပြေရိပ်” မှာ ထိုင်သေးတယ်။ ခရီးစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံး လက်ဖက်ရည် ပေါ့ဆိမ့်လေး သောက်ရတာပေါ့။ ကျန်တဲ့သူတွေ စားတဲ့ နန်းကြီးသုတ်ဆိုတာ မြည်းလိုက်သေးတယ်။ မဆိုးပါဘူးး။ မန်းလေးသူမို့ မန်းလေးကို မမှီဘူးလို့ပဲထင်တယ်။ မွဝေအိမ် ကူးတဲ့ အချိန်မှာ အစားတွေကတော့ အိမ်လက်ရာတွေ အစုံမို့ ……. မွ ဝေ လုပ်ထားတဲ့ ဆူရှီး အပြင် အဲဒီမှာ ကောက်တေး ဘဆွေရဲ့ ကောက်တေး စ မြည်းဖူးကြတာပဲ။
မမာကလည်း ဝက်သားဒုတ်ထိုးနဲ့ ကြာဇံကြော်။
မွသဲက ဘိတ် အာပုံ
မွညိုမာ က မုန့်လိပ်ပြာတွေ သယ်လာတယ်။
မွဝေ အိမ်က အပြန် မွအိ ဆီ ဝင်ပြီး ကိုယ့် အမရဲ့ နာမည်ကြီး လက်ရာ ဆန်းဝစ် လေးနဲ့ ကော်ဖီလေးမျှောလိုက်သေးတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တော့ အိမ်ကပ်တယ်လေ။ နီးနီးနားနား အင်းဝလမ်း နဲ့ သစ္စာလမ်းထောင့်၊ တောင်ဥက္ကလာ က“ကျောက်ဖြူ ရခိုင်ဆိုင်” သွားစားတယ်။ “မင်းလမ်း” ထက်ကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ မှာရတာလည်း မြန်တယ်။ ပုံပါ အစားအသောက်တွေမှ ၁၀၀၀၀ကျပ်ပဲ ကျတယ်။ မဆိုးဘူး ။
“ကျောက်ဖြူ ရခိုင်ဆိုင်” ကြက်သောက်ဆမ်း ပုဇွန်ကင် မုန့်ဖတ် အချိုသုတ် ရခိုင်သုတ် ငှက်ပြောဖူးသုတ် ရခိုင်မုန့်တီ
ညဘက်ကျ နီးနီးနားနား သစ္စာလမ်းမကြီး ပုန္ဏမီမှတ်တိုင် နားက”ဝင်း ကြေးအိုးဆိုင်” က ဆန်ပြားကြေးအိုးလေး တစ်ပွဲပဲ စားတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ ဆီချက်တို့ ကြေးအိုးကြာဇံဆီချက်တို့လည်း မြည်းလိုက်သေးတယ်။ အသားများတယ်။ အရသာကောင်းတယ်။ အသားကင်လည်း ရတယ်။ အချဉ်ကောင်းတယ်။
ဖေဖောရီ ၂ ရက်နေ့ကျလည်း အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းပဲ။
ညဘက်ကျ အမ တစ်ယောက်က ညစာကျွေးမယ်ဆိုလို့ အစက မြန်မာပလာဇာ ကိုချိန်းလိုက်တာ။ ၄ ထပ်မှာ အစားအသောက်ဆိုင်ချည်းပဲ။ သူ့ကို စောင့်ရင်း မြန်မာပလာဇာ က”ရွှေပလ္လင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်” မှာ ဝင်ထိုင်လိုက်သေးတယ်။ လက်ဖက်ရည်က သပြေရိပ်ထက် ကောင်းတယ်။ ပေါက်ဆီလေး ဝက်သားပေါင်းလေးပါ မြင်တော့ မနေနိုင် မှာစားလိုက်မိသေးတယ်။
အမလာတော့ ဒီပေါ်က ဆိုင်တွေမှာ မစားချင်ဘူး အကင်ပဲသွားစားရအောင် ဆိုပြီး ထုံးစံအတိုင်း ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်က”ယူနန် အကင်ဆိုင်” ကိုချီတက်ကြတယ်လေ။ ဈေးသင့်တယ်၊ နေရာသန့်တယ်၊ ကားရပ်ရတာအဆင်ပြေလို့ အကင်ဆို ယူနန် ကို ပဲသွားတယ်။
ဖေဖော်ရီ ၃ ရက်နေ့ကျ လှည်းကူးသွားစရာရှိတာနဲ့ သွားရင်း “နန်းမြို့တော် စားတော်ဆက်” မှာ နေ့လည်စာ စားဖြစ်တယ်။ ပဇွန်ချဉ်သုပ်နဲ့ ကြက်သည်းမြစ်ကလွဲရင် ကျန်တာ သာမာန်ပါပဲ။
အပြန်ကျ “အိုင်တီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်” ထိုင်တယ်။ ပြည်လမ်းပေါ်မှာ ရှိတယ် လှည်းကူးဘက်ကလာတော့ ဘယ်ဘက်က ခြံဝန်းကြီးထဲမှာ ဖွင့်ထားတာ။ ကျယ်တယ်။ ကားရပ်တဲ့နေရာက ဝန်ထမ်းတွေက သွက်တယ်။ အိမ်သာသန့်တယ်။ နေရာကောင်းတယ်။ လက်ဖက်ရည်သောက်မိတော့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ သစ်သီးလက်ဖျော်လည်း မျိုးစုံရှိတယ်။ ပလာတာမြည်းခဲ့တာ မဆိုးဘူးး၊ နန်းကြီးသုတ်ကတော့ မန်းလေးမမှီ။ နေရာ အတော်ကြိုက်ခဲ့တယ်။
ဖေဖောရီ ၄ ရက်နေ့ မန်းလေးသွားပြီ။ လမ်းမှာ နေပြည်တော် ရပ်နားစခန်း မှာ နားတော့ “မြောင်းမြဒေါ်ချို” မှာ စားဖြစ်တယ်။ မြန်မာထမင်းဟင်း လက်ရာ အတော်ကောင်းပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးကိုတော့ အပြန်မှ မြည်းမယ် တေးထားခဲ့တယ်။
အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်း အုန်းအုန်း ပဲထမင်း မန်းမြို့တော် ပေါက်ဆီ ပဲပြုတ် နံပြား
ပန်းသခင် လက်ဖက်ရည် ကော်ရည် စတာတွေ လှည့်ပတ်စားနေတာမို့ ပုံတွေကလည်း ဗျောက်သောက်…..
ဖေဖော်ရီ ၆ ရက်နေ့ စစ်ကိုင်းသွားဖြစ်တယ်။ “ဒေါ်ရိတ်ကြီး အသုတ်ဆိုင်” ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ဝင်စားဖြစ်တယ်။ ၆ ယောက်ကို ၆ ထောင်လောက်ပဲ ကျတာမို့ တန်တယ်ခေါ်မလားး။ အသုတ်တွေလည်း စားကောင်းတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အညာသူမို့ ဆိုင်ရဲ့ သစ်သားတန်းလျားတွေနဲ့ စားရတာလည်း ကြိုက်တယ်။
၇ ရက်ညတော့ မွေးမေလေ့ မွေးနေ့ကို လမ်း ၃၀၊ ၆၄ လမ်း နဲ့ ၆၅ လမ်းကြားက“Life Dimsum & Cafe” မှာ လုပ်ပေးဖြစ်တယ်။ ဒီ ဆိုင်သစ်က ကားရပ်ရတာ ကောင်းတယ်။ အရသာလည်း အတော်ကောင်းတယ်။ မနက်နေ့လည် ည အတွက် စုံတယ်။ ခုဆို ဘယ်လို မိသားစုပွဲလေး ကျင်းပချင်ချင် အစားအသောက်အပြင်အဆင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတယ်လို့သတင်းကြီးလို့ပါ။
၈ ရက်နေ့တော့ အိမ်မှာပဲ စားတယ်။ ညဘက် ဝိုင်ကေကေအို မှာ စားတယ်။ ရေးဖူးတာမို့ ချန်ခဲ့ပြီ။
၉ ရက်နေ့ ညစာကို “Life Dimsum & Cafe” မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထပ်သွားစားတယ်။
“Life Dimsum & Cafe”
၁၀ ရက်က ကန်တော်ကြီး သံဃာ့ဇီဝိတဒါန ဆေးရုံမယ် မိသားစု အလှူလေးရှိတယ်။ ဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုက်ရုံ နဲ့ အလှူမနက် ဒီတိုင်းထသွားရုံပါပဲ။ ချက်ပြုတ်တာရော စီစဉ်တာရော ပြည့်စုံပါတယ်။
၁၁ ရက်ကျ မေမြို့ တက်တယ်။ နေ့လည်စာကို “ရွှေမူဆယ် စားသောက်ဆိုင်” မှာ စားတယ်။
ရှမ်း တရုတ်စာ အရမ်းစားကောင်းတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင် အကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ သန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားထာတ်အာ သိသာပါတယ်။ ၁၂ ယောက်ကို ၃သောင်း၂ထောင်လောက်ပဲကျတာမို့ တန်တယ်ပဲ ယူဆပါတယ်။
စားပြီးတော့ သျှမ်း မလိုင်လုံးလေးပဲ မြည်းမယ်ကြံထားတာ။ လိုက်ပို့တဲ့ အမတွေက တစ်ဆိုင်ခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ လိုက်သွားတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဖြင့် စားလို့ သောက်လို့ အတော်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်ပါ။
ပူတင်း ပုံရိုက်ဖို့တောင် မေ့သွားလို့ အထွက်ကျမှ ဆိုင်ကိုပဲ ရိုက်ခဲ့နိုင်တယ်။
၁၂ ရက်နေ့ စစ်ကိုင်းဘက်ထပ်သွားပြီး ည အပြန်မှာ အမရပူရက “အိပ်မက်ချို စားသောက်ဆိုင်” မှာ ဝင်စားဖြစ်တယ်။ သူ့နေရာမှာ သူ့လက်ရာလေးနဲ့သူတော့ ကောင်းတယ် ဆိုရမယ်။ ဘီယာလေးပါ ပါရင် ပိုကောင်းတဲ့ ဆိုင်မျိုးပေါ့။ ဟိ။ ချိုချဉ်ကြော်နဲ့ ငါးကင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၁၃ မနက် ကျသူငယ်ချင်းတွေ “Life Dimsum & Cafe” မှာ ဒင်းဆမ်း နဲ့ ကျောက်ချထိုင်ပြီး လေပစ်ကြသလေ။
၁၄ ရက်နေ့ ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတာ နေပြည်တော်မှာ နားဖြစ်တော့ တေးထားတဲ့ “မြောင်းမြဒေါ်ချို မုန့်ဟင်းခါး” ကို မြည်းမယ်ကြံရင်း ၂ ပွဲ စားဖြစ်သွားတယ်။
“မြောင်းမြဒေါ်ချို မုန့်ဟင်းခါး”ညဘက် တုန်စိန် တို့ အောင်မိုးသူတို့နဲ့ ချိန်းလိုက်သေးတယ်။ ဝေဇယန္တာ စီးတီးမတ်မှာ။ “Happy Noodle & Cafe” တဲ့။ ကိုယ်က ညစာ အိမ်မှာ စားခဲ့တာမို့ ကော်ဖီပဲ သောက်လိုက်တယ်။ ကောင်းတယ်။ မိုးသူလာတော့ ပြောတာ ဒီဆိုင်က နာမည်ကြီးသတဲ့။ ခေါက်ဆွဲတို့ ထမင်းနယ်တို့ ကောင်းတယ်တဲ့။ အင်းယားလမ်းမှာ ဆိုင်ပင်ရင်းရှိသတဲ့။ ဗိုက်က ဘယ်လိုမှ မရတာမို့ မစားခဲ့ရပဲ တေးထားလိုက်ရတယ်။ ၁၅ ရက်နဲ့ ၁၆ ရက် ကတော့ အိမ်မှာပဲ ထူးမခြားနား စားနေတာပါပဲ။
၁၇ ရက်နေ့မနက်ကျ ကောင်းကင်ပြာလေးက MICT ထဲမှာ မုန့်လျှောက်စားရအောင်လို့ ဖျားယောင်းသလေ။ ဟိ။
မနက်ခင်း MICT က “Oriental House” မှာ ဒင်းဆမ်း စားတာ ဘယ်လောက်စားတုန်း ပုံမှာသာကြည့်တော့ ။
ကော်ဖီ ၂ ခွက်လည်းသောက်ခဲ့တယ်။ ညီမလေးက သင်္ဘောသီးထောင်း ၃ ဘူးထည့်ပေးလိုက်သေးးး။ စားရင်း တစ်ယောက်ထဲ တစ်ဘူးကုန်သွားသေးး။ ဆိုင်ကိုတော့ သူ့ကို မေးကြပါကုန်။ နေ့ခင်းကျ ကိုနိုဇိုမိနဲ့ ချိန်းထားတာနဲ့ (၂ယောက်ထဲ မီဟုတ်ပါပု၊ တခြားသူတွေပါ ပါပါတယ်) မွသဲ ရွေးတဲ့ ဆိုင်က ကိုယ် စားချင်နေတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်နေရောပဲ။ “Happy Noodle & Cafe” ပါ။ အင်းယားလမ်းထဲက။.
ကျိုင်းတုံခေါက်ဆွဲ အရသာကောင်း။ (ခေါက်ဆွဲ အတွက် တို့ဟူးခြောက်ကျော်တို့ ဝက်ခေါက်ကြော်တို့က အလကားပေးတာတဲ့။ ဟိ)
ဟက်ပီး ဘဲဥတဲ့။ (ထန်းညက်နဲ့မန်ကျည်းချဉ်အရသာရတယ်။) ဘယ်လိုလုပ်ထားမှန်းတော့ မသိ။။ စားကောင်းတယ်။.
ငှက်ပျောသီး ပျားရည်လည်း ကောင်းတယ်။
ဟီးဟီးး ပုံတင်ထားသမျှ အကုန်ကြိုက်နေရောပဲ။ နေရာကလည်း ကိုယ့် အကြိုက် ဝန်းကြီးထဲမှာ သီးသီးသန့်သန့်လေးးး သဘောတွေကျတာဆို။
“Happy Noodle & Cafe”
ညနေဘက်ကျ ချာတူးတို့ နွယ်ပင်တို့နဲ့ ချိန်းထားတာနဲ့ တာမွေ အိုးရှင်း ကို သွားရတာ။
“Love Boat” ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေမှာ စားရင်း ပြောရင်း ရီရင်း မှာတာတွေ ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်းတောင် မသိ။
ယိုးဒယား စာ လို့ ပြောရမလားပဲ။
၁၈ ရက်နေ့တော့ အမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မမာ အိမ်ကို သွားစားတယ်။ မမာချက်ထားတဲ့ ဟင်းထမင်းတွေ အပြင် မွညို ရော မွသဲ ရော မွနို ရော ယူလာတဲ့ အစားအသောက်တွေ ….. ဟီးဟီးး 1
ညဘက် ကိုကိုကျောက်အိမ် ဝင်ပြီး ဘုရားဆက်သွားးး
သာကေတ “ရွှေပုဇွန်” ကို ဆိုင်ပိတ်ချိန်နားနီးနောက်ဆုံးမှရောက်ပြီး ဖာလူဒါလေးသောက်ဖြစ်အောင် သောက်လိုက်သေးတယ်။
၁၉ ရက်နေ့ကျ အထုတ်တွေ ပြင်ရင်း တောင်ဥက္ကလာ နန္ဒဝန်ဈေးနားက “ပညာလမ်းထိပ် အသုပ်ဆိုင်” က နာမည်ကြီးနေတာမို့ သွားစားလိုက်သေးတယ်။ လူများတယ်၊ နေရာထိုင်ရတာမအိုကေဘူးး.. အရသာကတော့ ကောင်းတယ်။ အေးဆေးမရှိတော့ အစားက အရသာခံစားလို့ မရ။
၂၀ ရက် စလုံးပြန်ရောက်ပြီ။
ရောက်တာနဲ့ ဖြစ်မြဲလေးတွေ စ ပြီ။
မြန်မာပြည်တုန်းးက စိတ်ဆောင် သမျှ
ဒီရောက်မှ မြော့မြော့ ကျန်တော့တယ်…!! ???
အာ့နဲ့ အိမ်မှာ ဆေးခွင့်ယူပြီး
ကိုဘလက်ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ်ရယ် ကင်းကောင်လေး ပေးလိုက်တဲ့ ရှားလော့ဟုမ်းပေါင်းချုပ် စာအုပ်ရယ်နဲ့ နားနားနေနေပဲ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ငိုဘီလေ
သများလဲဝိတ်တွေတက် ဗိုက်တွေပူပြီးကျန်ခဲ့ပါရောလား။ အကျင့်ပါပျက်ပြီးဘီယာလေးကလဲနေ့တိုင်းလိုလို အဟင့် ခင်ဂျော်လူဇိုး
သများကိုဖျာယောင်းသွားဒါ ဗိုက်တလုံးနဲ့ကျန်ခဲ့ဘီ။ ရေသုံးပုလင်းပလော့ဂျက်လဲအစရှာမရဒေါ့ဘူးရယ် ဟီးဟီး
ခင်ဇော် says: ညင်းညင်း
ခင်ဇော်လာ ပတနာရှာ ဆိုတဲ့ စကားပုံတွေ မီကြားဖူးဘူးလားးး
ရေ ၃ ပုလင်း ပလော့ဂျက်ကနေ ဘီယာ ၃ ပုလင်း ပလော့ဂျက် ပြောင်းလိုက်တော့။.
Crystalline says: တန်လိုက်တာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဂလိုပဲ တန်အောင် ကြံရတာပေါ့အေရယ်
Thint Aye Yeik says: ကျနော်သာ ဆိုရင်တော့ ”အစားအသောက်”တွေ အကြောင်း ပိုစ့်တင်ရင်….
.ဖွေးဖွေး ပုံလေးတစ်ပုံလောက် ထည့်ပြီး..ဖွေးဖွေးလေးဟာဆိုရင်ဖြင့်… ဘယ်လိုလေး ချက်ပြုတ် နှယ်ဖပ်စားရင် ဘယ်လို အရသာ ရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း… စသည်…စသည်… ထည့်ရေးမိမှာ…
အခု အစားအသောက်ပိုစ့်ထဲ ဝင် ကွန်မန့်တာတောင်…ဖွေးဖွေး အကြောင်း ထည့်မရေးမိအောင်
မနည်း စိတ်ထိန်းထားရတယ်.. အတည် ပြောရရင်….
.အောင်မိုးသူတို့ဘက် ရောက်ဖြစ်ရင်…အုတ်ကားလာတဲ့ ဆောက်ခွဲဆိုင်…
အဲလေ.. ဥက္ကလာ-ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကို… ဝင်စားအုန်းမှ…
ခင်ဇော် says: အေးပါဧ။
နောက်ခါမှ ဖွေးဖွေးကိုပါ ချက်ပြုတ်ပြီး တင်ပါ့မယ်။
kai says: သမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာ… တဲ့..။
၀ါးတီးတွေအကုန်ဘယ်လိုလုပ်.. တထွာလောက်ထဲ.. ထည့်ပြန်သွားတယ်မသိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: သူများက တစ်ထွာ
တညား အစာအိမ်က တစ်တောင်။
ခု ပန်းကဘာထဲ ရောက်နေပြီလေ။
HMM says: တဂျီးကလဲ တစ်ရက်တစ်ထွာ ထည့်တာနေမှာပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2285
Ma Ei says: အဲ့လို စားနိုင်သောက်နိုင်တာများ နဲတဲ့ကုသိုလ်မှတ်လို့နော်…
စားနိုင် စားလို့ရတုံး စားချင်သလောက်စား အားကျချက်
တို့များတော့ ဟိုဟာမတည့် ဒီဟာမစားရ နဲ့ သနားစရာ…
ခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့။
မစားနိုင်တော့ရင်တော့ ငိုရမလား မသိ
Tawwin Pan says: သရေတောင်ကျတယ်။ မနက်စောစောစီးစီး စားစရာလေးတွေမြင်ရတာ။ စားနိုင်တာကို အားကျတယ်။ တချို့များကျတော့ ကိုယ့်လစာကိုယ်တိုင်သုံးပြီး အိမ်လည်း မပေးရတာတောင် ကိုယ်စားဖို့ကို နှမြောနေတတ်တဲ့သူတွေ့ဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံရှိရဲ့သားနဲ့ မစားရက်မသောက်ရက်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီး သနားတောင်သနားသွားတယ်။
ခင်ဇော် says: အစားအတွက် ဝီရိယလုံ့လ စိုက်ထုတ်မှုမှာ
ကိုကိုခင်ဇော် ကို ဘယ်သူမှ မမှီပါဘူး ညီမလေးရယ်။
Kaung Kin Pyar says: Oriental က ကော်ဖီမိုက်တယ်နော်.. မမဂျီး..ခါးဆိမ့်ဆိမ့်လေး..
အဲ့ဒီဆိုင်က သင်္ဘောသီးထောင်းက နာမည်ကြီးပဲ….။ ရှမ်းတွေရောင်းပြီး ရှမ်းစာ ပုံစားလဲ ကောင်း.. ဟီးး..
ပြောပါတယ်.. ဒါကြောင့် မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာပါဆို…:k: ။
မမဂျီးနောက်တစ်ခါ ပြန်လာမှ တစ်နေရာနည်းနည်းနဲ့ ဆိုင်ကုန်ပတ်စားမယ်… ဒီဦးစံရှားနဲ့ ဟိုဦးစံရှား ဘာကွာလဲဟင်.. :D
စု တု ပြု ပေမယ့် သေသပ်တယ် မဟုတ်လား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမဂျီးက ကော်ဖီ အရမ်းပူရင် စောင့်နေရတာမကြိုက်ဘူးး
ဒီ ဦးစံရှားကလည်း ကြိုက်တယ်။
black chaw says: ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ တစ်ရက်ပဲ တွေ့လိုက်နိုင်ပါတယ်…။
အရွယ်က ရ လာတော့ ကျန်းမာရေးက ချို့ယွင်းလာပါပြီ…။
မင်းလူ စာအုပ်က နိုဘယ်စာပေပွဲတော် တုန်းက ၀ယ်ထားတာ…။
၀ယ်ကတည်း က ခင်ဇော်ကြီး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ၀ယ်လိုက်တာ…။
ခင်ဇော်ကြီးကို မပေးခင် အိမ်မှာ ဖတ်ကြည့်သေးတယ်…။
မင်းလူ ဆိုတာ ဒါပဲ လို့ကို အော်ဟစ်မြည်တမ်းချင်စိတ်ပေါက်သွားတာ…။
ဒီတစ်ခေါက်လာသွားတာ ဧည့်ဝတ်မကျေပြွန်လိုက်ရတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်…။
ခင်ဇော် says: တန်ပါတယ်ဗျာ။
စာအုပ်ကို ၂ နာရီလောက် ဖတ်တာတောင် တဝက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
ကိုယ်ကလောဘကြီးလို့သာ။ အမှန်တော့ တစ်နေ့ တစ်ပုဒ် ချွေဖတ်ရင် အရသာရှိတာပေါ့
ကိုယ့် အကိုတွေရဲ့ စိတ်ထား သိပြီးသားပါဗျာ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဘဲစား စားခဲ့လား လူမိုက်ခင်ဇော်… ဘိုချုပ်ဈေးရှေ့မှာ စပို့ရှပ်၊ ဂျင်းပင်န် နေကာမျက်မှန်နဲ့ လာဘ်ပိုက်ရပ်နေတဲ့ ဘဲလေးတွေ ကောင်းမှကောင်းစ်
နိ စောစောကမှ မီပြောပဲ။
နာ ဒီ တစ်ခေါက် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကို မီရောက်ပု(စ)။
HMM says: တစ်ရက်လောက် အုကြောင်ညွှန်းတာ သွားဆွဲအူးမှဘာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
အရင်ဘဝက ဘာပုဏ္ဏား ဆိုလား ခုမှ ကြုံဖူးတော့တယ်
ခင်ဇော် says: နာက ဇူဇကာဘတ် အဲလေ
စူဇကာ ထက်တော့ စားးတတ်တယ် လို့ ဝန်ခံလိုက်…
ခုထိ စားးပို့ မနင့်သေးးပုစ်…
nozomi says: အစားသည် ပထမ
နေထိုင်မကောင်းများဖြစ်ရင် အစားရှေ့ရောက်ရင်တောင်ကြည့်ချင်တာ မဟုတ်ဘူးရယ်
ခင်ဇော် says: အဲဒီနေ့ က
ကို နို နလန်ထစ နုံးးနေတာ သိသာတယ်…
အောင် မိုးသူ says: မကြီးစားတာကို ကျတော် အမီလိုက်နေတယ်။ ဖေ့စဘွတ်မှာ ပုံတွေကို လိုက်ခ် လိုက်နှီပ်တာ လက်တာညောင်း ပုံတွေမကုန်သေးလို့ ပြန်ပိတ်လိုက်တယ် ဟိဟိ။
Swal Taw Ywet says: မန်းလေး နန်းရှေ့ဈေးကနေ အရှေ့ဘက်နားလေး
ကျနော်နဲ့ ကိုမာဃ အကြာကြီးထိုင်စကားပြောကြတဲ့ အကြော်ကောင်းတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး
ကျန်သွားတယ်။ စာအုပ်တွေ အလကားထိုင်ဖတ်လို့ ရသဗျ။
နောက် တခေါက်စ်ပေါ့စ် ကွာစ်စ်။
ခင်ဇော် says: ဟယ် .. ဟုလားး
kai says: KZ ရေ…
ဒီလ သတင်းစာထဲဒါကို အစားခရီးသွားဒိုင်ယာရီလုပ်ထည့်မလားလို့…
နည်းနည်းပြန်ညှိပေးလို့ရမလား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: A4 ဘယ်နှမျက်နှာလောက်ရတုန်းး
kai says: ရေးလေ.. လဆက်ထည့်လို့ရပါတယ်..။
အခုဧပြီမှာ လေကြောင်းလိုင်းတချို့ ဒေါ်လာ၉ရာအောက်နဲ့ ရန်ကုန်အရောက်ဈေးလျှော့ပေးထားကြသမို့ ပြန်မယ့်သူတွေများမယ်လေ..။
သူတို့တွေ… လိုက်စားလို့ရသပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4116
Foreign Resident says: အားရသကွယ် ။
ငယ်တုံး ၊ စားချင်တာ စားခွင့်ရတုံး ၊
လူ့ဘဝမှာ နေရတာလေး တန်သွားအောင် ၊
ကြိုက်တဲ့ အစား မှန်သမျှ ၊ ဖိ စားထားပါလေ ။
အသက် ရလာရင် ၊ ကျန်းမာရေး အရ ၊
ဟိုဟာ ရှောင်ရ ၊ ဒီဟာ လျှော့ရ နှင့် ၊
ကြာတော့ အကျင့်ရ ၊ အကျင့်ပါ ပြီး ၊
ဘာကိုမှ သိပ်စားချင်စိတ် မရှိတော့တာ ဖြစ်လာမယ် ။
မယုံ မရှိနှင့် ကိုယ်တွေ့ ။
အခုဆို ၊ အိမ်မှာ ၊ ကိုယ်တိုင် ငယ်ငယ်တုံးက ၊
အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ ၊ ချော့ကလက်တွေ ၊ မလိုင်လုံးတွေ ၊
ဝယ်ထားပြီး မစားဖြစ်လို့ အကုန် expire အောက်ကုန်တယ် ။
ခင်ဇော် says: ခုဆို ဆန်ပြုတ် နဲ့ ၂ ပါးသွားနေရဒယ် ဘဖော။
ဟီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.